Eskindir Tesfay – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Hitman: Agent 47 (2015) Unicode ဇီဝမြိုးရိုးဗီဇဆိုငျရာ. ပညာရှငျမြား ဦးဆောငျပွီး သာမနျလူတှထေကျ ခံနိုငျရညျ.. ဇှဲ.. ဉာဏျရညျဉာဏျသှေး အရာရာမှာပိုမိုစှမျးအငျမွငျ့မားပွီးမွနျဆနျတဲ့ ကွေးစားလူသတျသမား Agents တှကေိုဖနျတီးမယျ့ရညျရှယျခကျြနဲ့ သုတသေနလုပျကွတဲ့ ပရိုဂရမျတဈခုကနေ ဒီဇာတျလမျးကို အစပွုထားပါတယျ။ သူတို့ထဲက ပညာရှငျတဈယောကျက ဒီပရိုဂရမျနဲ့ နောကျဆကျတှဲဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှကွေောငျ့… ပရိုဂရမျကိုရပျတနျ့ဖို့ကွိုးစားတဲ့အခြိနျမှာ…. ဖွဈပျေါလာတဲ့ပွသာနာတှကေ မိသားစုဝငျတှကေိုပါ ထိခိုကျလာတဲ့အခါ… Credit Review Zawgyi ဇီဝမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ. ပညာရှင်များ ဦးဆောင်ပြီး သာမန်လူတွေထက် ခံနိုင်ရည်.. ဇွဲ.. ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး အရာရာမှာပိုမိုစွမ်းအင်မြင့်မားပြီးမြန်ဆန်တဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမား Agents တွေကိုဖန်တီးမယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သုတေသနလုပ်ကြတဲ့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုကနေ ဒီဇာတ်လမ်းကို အစပြုထားပါတယ်။ သူတို့ထဲက ပညာရှင်တစ်ယောက်က ဒီပရိုဂရမ်နဲ့ နောက်ဆက်တွဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်… ပရိုဂရမ်ကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာ…. ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြသာနာတွေက မိသားစုဝင်တွေကိုပါ ထိခိုက်လာတဲ့အခါ… Credit Review
IMDB: 5.7/10 85007 votes